ဗမာ မ၀င်ရ ဆိုပဲ.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဗမာ မ၀င်ရ ဆိုပဲ..
ဗမာ မ၀င်ရ ဆိုပဲ..
Posted by kai on Mar 18, 2010 in News | 13 comments
FORT WAYNE No Burmese
အင်ဒီယားနား၊ ဖို့ ဝိန်းမှာဖြစ်တဲ့ ဒီသတင်း သိတာ စဖြစ်တည်းကဆိုပါတော့၊
ဗမာတွေ ကွမ်းတံတွေးထွေးကြသမို့ ပေးမ၀င်ဘူးလို့ လွယ်လွယ်ထင်နေမိတာပါ။ ပြီးတော့ လောင်ဒရီ (အ၀တ်လျှော်စက်)ပိုင်ရှင်က လူထုရှေ့ ပြန်တောင်းပန်တာမို့ ပြီးလောက်ပြီလည်းထင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆန္ဒတွေဘာတွေပြ။ ပြသနာနည်းနည်းကြီးလာတော့ နည်းနည်းကြာလာတော့ “ဟ…ဒါက အမေရိကပဲ..”ဆိုပြီး ဖြစ်လာတာပေါ့။
အဲဒါနဲ့ သတင်းတွေလိုက်ဖတ်ကြည့်ရင်း နောက်ဆုံးသိတာလေး တင်ပေးလိုက်တာပါ။ဟိုတနေ့ကပဲ ဆရာလူထုဦးစိန်ဝင်းဆောင်းပါးဖတ်ပြီး အမေရိကရဲ့ လူမျိုးခွဲထား၊ ကွဲထားတွေအကြောင်း ရေးထားမိတော့ ဆက်စပ်မိသွားတာလည်းပါပါတယ်။
ဗမာတွေစွမ်းချက်က စင်္ကာပူလို သန့်လှပါတယ်။ ဒဏ်ကြေးချပါတယ်ဆိုတဲ့ တိုင်းပြည်လည်း ကွမ်းစားပြီး ထွေးတာပါပဲ။
တံတွေးဆိုတာ အခုလို ဗိုင်းရပ်တွေ။ ကြက်၊ငှက်၊၀က်တုပ်ကွေးတွေ သောင်းကျန်းတဲ့ ခောတ်ကြီးမှာ အန္တရာယ်ဖြစ်စေပါတယ်။ အခန့် မသင့်ရင် အဲဒီက ပိုးတွေကတဆင့် အပြစ်မဲ့သူတွေရဲ့အသက်ပါနှုတ်သွားတတ်ပါတယ်။
ကွမ်းစားပြီး တွေ့တဲ့နေရာ တွေ့ သလိုထွေးတာ လုံးဝမကောင်းတဲ့ အကျင့်ပါ။ မြေကြီး၊လမ်းမပေါ် ဆော့နေတဲ့ကလေးတယောက် အဲဒီကွမ်းသွေးကတဆင့်..ေ၇ာဂါကူးစက်ပြီး အသက်ဆုံးပါးသွားရင် ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲ။ဘာလုပ်ကြမှာလည်း။
အဲဒီလို ဗရမ်းဗတာ ထွေးကြတာဟာ ကိုယ်တိုင်ရဲ့ တာဝန်မယူနိုင်မှု(တာဝန်မဲ့မှု)ကိုလည်းပြပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့တဲ့ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆေးရီုးလှမ်းတာမျိုးပါပဲ။
အဲဒါကြောင့် ဗမာမ၀င်ရဆိုတာကြီးကတော့ စော်ကားရာရောက်စေပါတယ်။ ဗမာအကုန်လုံးသိမ်းကြုံးရမ်းလိုက်သလိုမို့ ပါ။ ဖို့ဝိန်းမြို့ ဆိုတာက ဗမာတွေ ထောင်ချီနေကြတာမို့ ဒီတဆိုင်အ၀တ်မဆလျှာ်နိုင်ရင် တခြားတနေရာ အ၀တ်ထုတ်နဲ့ ဘယ်လိုသွားကြမလဲ။ ဆောင်းတွင်း ချမ်းချမ်းစီးစီးဆို ပိုသာဆိုးတာပေါ့နော။
ဒီတော့..တောင်းပန်တာလဲ လုပ်ပြီးပြီ။ မြို့ တော်ဝန်ကလည်း ခေါ်တွေ့ဖို ကမ်းလှမ်းနေပြီ။ အင်မတန်ကောင်းကြပါတယ်။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကလေးမှတ်တန်းကျန်ရစ်အောင်ရယ်ပါ။ မူရင်းသတင်းကတော့ အောက်မှာဖတ်ပါ။
Story Published: Mar 15, 2010 at 5:29 PM EDT
Story Updated: Mar 15, 2010 at 5:29 PM EDT
FORT WAYNE, Ind. (Indiana’s NewsCenter) — Mayor Tom Henry chosealate-in-the-day email press release rather thanastatement before the press to invite Burmese leaders to meet with him. He responded toaweekend protest by dozens of Burmese who called forastop to discrimination.
Their protest culminatedaweek afterasign posted by an employee ofaRicker’s laundry told Burmese customers to stay out. The sign appeared and then was removed, followed byapublic apology by owner Jay Ricker. An employee had apparently posted the sign because of hygiene problems with some Burmese customers who had urinated and spat inside the business.
“Statement of Mayor Tom Henry on Burmese Integration:
Fort Wayne, Ind. – Following recent events, I am inviting leaders from the Burmese community and those who work closely with this growing population to meet with me personally.
Our city hasalong history of welcoming immigrants. Like many other Americans, my family came to this country looking for new and better opportunities. Whether then or now, we know the challenges to newcomers are many. But for more than two centuries, our community has been enriched by the talents, skills and cultures of those that call Fort Wayne home. Our city is stronger and more vibrant because of its diversity. It is hallmark of our All-America City and something for which we all should be proud.”
ကျွန်တော်ပြောချင်ဒါ အဲ့ဒါ လူမျိုးရေးခွဲခြားတာလုံးဝလက်မ ခံချင်ဘူး ဝါးလုံးရှည်နဲ့ရမ်းဒါ လူ့အခွင့်ရေးကိုချိုးဖေါက်ခြင်းဘဲ…
သို့သော် တဦးတယောက်စည်းဖေါက် လို့ အများခံရတာ ဟာလည်း အမျိုးရဲ့မျက်နှာကို အိုးမဲသုတ် လူရှေ့ပြ အရိုင်းမျောက်ျတကောင်လိုပေါ့
ဘယ်သူ မပြု မိမိမှု တဲ့။ အနေအထိုင်မတတ်တော့ ငါးခုံးမတကောင်ကြောင့် တလှေလုံး ပုပ်ပြီ။ လူတိုင်း ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူများနိုင်ငံမှာ အငှားနေနေတဲ့သူတွေပေါ့။ မျောက်သစ်ကိုင်းလွတ် မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
ကိုယ်ကြိုက်လို့ကိုယ်စားလည်းစည်းကမ်းမဲ့ထွေးတာတော့ မကောင်းပါဘူး။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာလည်း ကွမ်းထွေးတဲ့ညစ်ပတ်မှုက တော်တော်ဆိုးနေပါ တယ်။ တားမဲ့သူလည်းမရှိ။ မလုပ်သင့်မှန်းလည်းမသိ။ တော်တော်ဆိုးပါတယ်။ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့နိုင်ငံကိုလည်းကြည့်ကြပ်ပြီးနေထိုင်ပြုမူပေါ့။ အခုတော့ လူမျိုးရဲ့ Dignity ကို ထိခိုက်သွားပါပြီ။ နောင်ရှောင်ကြရင်တော့ ကောင်းပါ တယ်။
ကျနော်တို့ မနီလွိုင်းက ထွက်လာခဲ့ကြတာပါ၊ ဥပမာလေး တခုကိုပြောပြပါ့မယ်၊ ငပြူးလို့ခေါ်တဲ့ ဒုက္ခသည်တယောက်က ပါတ်ဝန်းကျင် ဈေးဆိုင်က ဘဲကို ခိုးတယ်။ ဆိုင်ရှင်က ငပြူးကို သေနတ်နဲ့ပစ်တယ်။ ငပြူးကို အွန်ဆော့လို့ နာမည်တပ်ထားတဲ့ ကျောင်းသားအဖွဲ့က အကာအကွယ်ပေးတယ်၊ နောက် မနီလွိုင်း ပျက်တယ်၊ ပြောချင်တာက လုပ်တဲ့သူနဲ့ အလုပ်ခံရတဲ့သူ။ အလုပ်ခံရတဲ့သူနဲ့ လုပ်တဲ့သူ သေသေချာချာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိဘဲ ငါတို့ကတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါတို့ လူကိုကာကွယ်ရမှာပဲ။ မှားမှားမှန်မှန် ငါတို့မှန်တယ် ဆိုတဲ့ တယူသန် အကျင့်စရိုက်ကို ပြင်ဖို့ ကောင်းပါပြီ။ အခုလည်း ဖို့ဝိန်းမှာ ဖြစ်တာ ကွန်းစားတဲ့ သူတွေကို နောက်မလုပ်ဖို့ ဆင်ခြင်ဖို့ ပြောဖို့လိုသလို။ လက်လွတ်စပါယ် ရေးတတ်တဲ့ အမေရိကန်ဌာနေ လူမျိုးတွေကိုလည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် အသိပေးသင့်ပါတယ်၊ တယောက်မကောင်းရင် တယောက်ပဲ သီးသန့် အပြစ်ပေးအရေးယူသင့်ပါတယ်၊ ဒါကို ကျန်တဲ့ ဗမာနိုင်ငံသားတွေကလည်း ဟာ ဗမာနိုင်ငံသားကွဆိုပြီး ဆတ်ဆတ်ထိမခံ လုပ်တာမျိုးတွေ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်၊ ကွန်းစားခြင်းဖြင့် လည်ချောင်း ကင်ဆာ ရနိုင်ကြပါစေ၊
အင်း……ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး ကိုယ့်လူမျိုးဘက်ကလိုက်ပြောရအောင်လည်းကိုယ့်လူမျိုးတွေကစည်းကမ်းမရှိတဲ့လူကခက်များများရယ်ကိုယ့်လူမျိုးကိုပြောတော့လည်းမခံချင်ဘူးအဓိကပြောရမှာကမြန်မာတွေစည်းကမ်းရှိကြပါဆိုတဲ့စကားပဲရှိတယ် ကိုယ်တစ်ယောက်အတွက်ကြောင့်နဲ့ကိုယ့်လူမျိုးတစ်ခုလုံးကိုအပြောခံရမယ့်အဖြစ်မျိုးမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ပဲပြောရတော့မှာပေါ့
ဒါပေမယ့် စည်းကမ်းမဲ့ကွမ်းတံတွေး ထွေးတာကိုတော့ လက်မခံပါဘူး
တစ်ယောက်ချင်းဆီ ကောင်းအောင်နေကြရင် ဘာပြဿနာမှမရှိနိုင်ပါဘူး
ငါးခုံး မတစ်ကောင်ကြောင့်တစ်လှေလုံး ပုတ်တာပါ ဗျာ
ဟုတ်တယ် ကွမ်းစားတာ ကြိုက်ကိုမကြိုက်ဖူး
ဘာမှမတွေးဖူး မြင်တာတော့ ပိုက်ဆံတွေကို ဆေးအနီသုတ်ပြီးဝါးနေတာပဲ
ဆေးလိပ်လိုပေါ့ ပိုက်ဆံကိုမီးရှိူ့ပြီ သောက်နေတာလေ
ကွမ်းစားတာကိုတော့မပြောလိုပါဘူး။ကိုယ်ကြိုက်လို့ကိုယ်စားတာပဲ စားပါ ဒါပေမယ့်ကွမ်းတံတွေးထွေးမယ်လို့ဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်ရဲ့ဧည့်ခန်းထဲမှာကောတွေ့တဲ့နေရာထွေးမှာလား? ကွမ်းစားတဲ့သူတိုင်းဘယ်သူမှလုပ်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ဘယ်နေရာမှာပဲစားစား ကွမ်းတံတွေးထွေးတော့မယ်လို့ဆိုရင်၊ ကိုယ့်အိမ်ရဲ့ဧည့်ခန်းလေးလိုသဘောထားပြီး စည်းကမ်းရှိစွာနဲ့ပြုမှုလုပ်ဆောင်ပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။မိမိကြောင့် မိမိဂုဏ်သိက္ခာ၊ကိုယ့်မိသားစု၊ကိုယ့်လူမျိုး ဂုဏ်သိက္ခာတွေကျဆင်းမယ်ဆိုရင်မကောင်းပါဘူး။အထူးသဖြင့်သူများနိုင်ငံမှာ နေနေရတဲ့အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားဆင်ခြင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါ တယ်။စည်းကမ်းမဲ့ကွမ်းစားသူများကိုသာဆိုလိုပါသည်။
JYO GYI says:
တခြားပာာ ပြောင်းစားဖိုဆို ရင် ဘာစားရင်ကောင်းမလဲ။ အကျန်အညံလေး ပေးပါဦး။